Yini okufanele uyenze uma izithandani zikude | Bezzia
Yini okufanele uyenze uma izithandani zikude
UMaria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | Ubudlelwano
Ukuqaphela ukuthi umlingani ukude kungenye yokwesaba kwalabo bantu abasebudlelwaneni. Ukuqhela kancane kancane kubanga ukuthi izinto azisafani nasekuqaleni kobudlelwano, okudala ukwesaba ukuthi kuzoba ukuphela kwabo.
Ebhekene nalokhu, umuntu obandakanyekayo akazi ukuthi enzeni, ukuzama ukwenza yonke into ibuyele emuva njengasekuqaleni. Ezimweni ezinjalo, kuyadingeka ukuthola imbangela noma isizathu sokuthi kungani elinye lamaqembu ngaphakathi kombhangqwana selikude nelinye.
1 Isibopho esingaphakathi kwabashadikazi
2 Izimbangela zokuhlukaniswa phakathi kwezithandani
3 Ungenza kanjani uma umlingani ekude
Isibopho esingaphakathi kwabashadikazi
Ukuze umbhangqwana uhlanganise futhi ukhule, kubalulekile ukwakha isibopho. Kufanele kube nokuzwana okuthile maqondana nokunikela nokwamukela. Uma lokhu kungenzeki, kungenzeka ukuthi isibopho sizoncipha kancane kancane bese kuqala ukuhoxa kwelinye lamaqembu. Ukuze isibopho siqiniswe, kufanele kube nokwaneliseka okuvela kubo bobabili abathintekayo ezingeni lomzwelo nelinomuzwa. Uma lokhu kungenzeki, kuyinto ejwayelekile ukuthi elinye lamalungu liba kude futhi ubudlelwane buzophela.
Izimbangela zokuhlukaniswa phakathi kwezithandani
Kunezizathu eziningana zokuthi kungani umuntu engaba kude nomlingani wakhe:
Umuntu ulahlekelwe ukulahleka kothile obalulekile futhi uphakathi kosizi. Ngokunikezwe lokhu, kujwayelekile ukuthi isimilo somuntu sishintshe kakhulu futhi ingakhombisa insizwa ethize kulezi zithandani. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukumnika lonke uthando olungenzeka.
Ingcindezi etholwe ngumsebenzi, ngumndeni noma ngumlingani wakho, Kungadala ibanga elithile ebudlelwaneni. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukukhuluma nabashadikazi futhi nisungule yonke imihlahlandlela yokunqoba ingcindezi enjalo.
Ukulwa ngawo wonke amahora kungamqeda amandla umuntu futhi khetha ukuhlala kude ebudlelwaneni. Izingxabano nokulwa akulungile kwabashadikazi ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi ukhulume ngezinto bese uphakamisa izixazululo ngakho.
Ukuhlupheka ngenxa yokungathembeki Kungenye yezimbangela ezivame kakhulu umuntu angahlukaniswa ngazo nomlingani wakhe.
Ungenza kanjani uma umlingani ekude
Lapho imbangela ebangela ukuqhelelana okunjalo isitholakele, kubalulekile ukuthola isisombululo ukuze isixhumanisi singaphuli:
Kubalulekile ukuhlala eduze kwezithandani futhi mbuze ngendlela ezothileyo isizathu sokuqhelelana okunjalo.
Ukuba nozwela nomlingani wakho kukusiza wazi ukuthi uzizwa kanjani futhi ukwazi ukulungisa inkinga.
Akufanele uwele ekuziqhenyeni futhi ube kude nomlingani. Uma lokhu kwenzeka, izinto zizoba zimbi kakhulu futhi kuzoba nzima kakhulu ukuthola kabusha isixhumanisi.
Ngamafuphi, uma umlingani wakho ekude, kubalulekile ukwazi imbangela ebangele lesi simo zama ukwenza yonke into ibuyele ngendlela eyayingayo ngaphambili. Isibopho phakathi kwezithandani kubalulekile futhi ukunakekelwa kufanele kuthathwe ngangokunokwenzeka ukuvimbela lo mbhangqwana ngokwawo ukuba ungahlukani.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Yini okufanele uyenze uma izithandani zikude
Amadolobha ama-5 eFrance lapho ungathanda ukuhlala khona
Izinto ezi-5 okufanele uzenze nsuku zonke ukuze ube nempilo